ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်း (မြန်မာ၊ ဗီယက်နမ်)
ဤရှင်လုကာကျမ်းရှိ ခရစ်တော်၏သက်တော်စဉ်ကို သမားတော်လည်းဖြစ်၊ ရှင်ပေါလု၏ခရီးသွားဘော်လည်းဖြစ်သော ရှင်လုကာက ရေးသားခဲ့သည်။ ဤကျမ်းသည် သူရေးသားခဲ့သော ကျမ်းနှစ်ကျမ်းအနက် ပဌမကျမ်းဖြစ်သည်။ (ဒုတိယကျမ်းမှာ တမန်တော်ဝတ္တုဖြစ်သည် (တ၁း၁)ကို ကြည့်ပါ) ဤကျမ်း၏ အဓိကအကြောင်းအရာကို တမန်တော်ဝတ္တုတွင်လည်း တွေ့ရှိရသည်။ အာဒံအားဖြင့်စတင်ခဲ့ပြီးဖြစ်သော ဘုရားသခင်၏ အကြံအစဉ် အလုံးစုံကို ရှင်လုကာက ဖေါ်ပြသည်။ ယုဒလူနှင့် တပါးအမျိုးသားများကို တန်းတူညီတူ ဖြစ်စေကာ တကမ္ဘာလုံး၏ ကယ်တင်ရှင် သခင်ယေရှုကို ဘုရားသခင် အကြံအစည်တော်၏ အချက်အချာ နေရာတွင် ထားသည်။ ခရစ်တော်၏ သက်တော်စဉ်ကို တင်ပြရာ၌ ရှင်လုကာသည် သခင်ယေရှု၏ ဆုတောင်းခြင်းကဏ္ဍကို ဖေါ်ပြသကဲ့သို့ လူ့အဖွဲ့အစည်း၌ အနှိမ်ခံရသူများအား ဂရုဏာ သက်မိခြင်းနျင့် လူမှုရေးရာ ဂရုစိုက်မှု ရှိကြောင်းကို အထူးဖေါ်ပြထားပါသည်။ ၄င်းအပြင် ရှင်လုကာသည် ရွှင်လန်းဝမ်းမြောက်ဘွယ်ရာ များနှင့် ဘုရားသခင်အား ချီးမွမ်းခြင်းတို့ကို ထည့်သွင်းဖေါ်ပြထားပါသည်။
ဤကျမ်းကို ဖတ်ရှုလျှင် လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ရမည့် အရာများစွာ ရှိကြောင်းသိစေသည်။ (၁) သခင်ယေရှုတပါးတည်းသာလျှင်ကယ်တင်ခြင်းကို ရစေသည့် လမ်းဖြစ်၍ ကျွန်ုပ်တို့ တဦးစီသည် ကိုယ်တော်ကို ကျွန်ုပ်တို့၏ မူပိုင်ကယ်တင်ရှင်နှင့်၊ အရှင်သခင်အဖြစ် သိမှတ်ရမည် ဖြစ်သည်။ (၂) စိတ်ထက်သန်စွာ ဆုတောင်းခြင်းနှင့် သန့်ရှင်းသော ၀ိညာဉ်တော်ကို အားကိုးခြင်းမရှိလျှင် ဘုရားသခင်အတွက် ကြီးမားသောအရာကို လုပ်ဆောင်နိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ (၃) အဖွဲ့အစည်းတွင် မတရားစွာ ပြုမူဆက်ဆံခြင်း ခံစားရသူများအပေါ် သခင်ယေရှုက ဂရုစိုက်သကဲ့သို့ ကျွန်ုပ်တို့လည်း ဂရုစိုက်ကြရမည် ဖြစ်သည်။ (၄) ခရစ်တော်အားဖြင့် ဘုရားသခင် ပေးသနားတော်မူသည့် နက်နဲသော အကျိုးကျေးဇူး၏ ၀မ်းမြောက်ဘွယ်သော သိတင်းသည် ကြီးမားသော ရွှင်လန်းဝမ်းမြောက်ခြင်းကို ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။ (၅) ခရစ်တော်သည် စာတန်မာန်နတ်နှင့် မှောင်မိုက်၏ တန်ခိုးများအပေါ် အစဉ်အမြဲ အောင်ပွဲခံနေသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့လည်း အပြစ်၏ တန်ခိုးများအပေါ် အောင်မြင်စွာ အသက်ရှင်သွားနိုင်သည်။
၂။ ရှင်လုကာ ခရစ်ဝင်ကျမ်းကို မည်ကဲ့သို့ ဖတ်ရမည်နည်း။
ရှင်လုကာသည် သောဖိလု ဆိုသူအား သခင်ယေရှု၏ အကြောင်းကို သွန်သင်ပြသရန် မြှော်လင့်လျှက် "အလွန်တရာ မွန်မြတ်သော သော်ဖိလု" အုပ်ချုပ်ရေးအရာရှိတဦး ဖြစ်နိုင်သည်) ဟူ၍ လိပ်မူကာ ဤကျမ်းကို စတင်ရေးသားခဲ့သည်။ ဗတ္တိဇံဆရာ ယောဟန်နှင့် သခင်ယေရှု၏ မွေးဖွားခြင်းအကြောင်း များကို ပြောပြပြီးနောက် ရှင်လုကာသည် နေရာဒေသ (၃)ခု ခွဲ၍ သခင်ယေရှုသက်တော်စဉ်ကို တင်ပြထားသည်။ ၄င်းဒေသများမှာ ဂါလိလဲပြည်တွင် ဖြစ်ပျက်ခဲ့သော အကြောင်းအရာများ (၄း၁၄-၉း၅၀)၊ ယေရှု ယေရုဆလင်မြို့သို့ သွားသော လမ်းတလျှောက်တွင် ဖြစ်ပျက်ခဲ့သော အကြောင်းအရာများ (၉း၅၁-၁၉း၂၇) နှင့် ယေရုဆလင်မြို့တွင် သခင်ယေရှု၏ နောက်ဆုံးအပတ် အတွင်း ဖြစ်ပျက်သည့် အကြောင်းအရာများ (၁၉း၂၈-၂၄း၅၃) တို့ ဖြစ်သည်။ ဤခရစ်ဝင် ကျမ်းတခုလုံးတွင် သခင်ယေရှု၏ ဥပမာပုံပြင်များ၊ အံ့သြဘွယ် ပြုသောအရာများ၊ ဟောပြောချက်များကို ဘော်ပြထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ကြားနေကျဖြစ်သော အခန်းများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
- ဗတ္တိဇံဆရာ ယောဟန်မွေးဖွားခြင်း (၁)
- သခင်ယေရှုမွေးဘွားခြင်းနှင့် သူငယ်ဘ၀ (၂)
- ဗတ္တိဇံဆရာ ယောဟန်၏ အမှုဆောင်ခြင်း (၃)
- သခင်ယေရှု၏ စုံစမ်းခံတော်မူခြင်းနှင့် သာသနာပြုခြင်းအစပိုင်း (၄)
- မြေညီရာ လွင်ပြင်အရပ်တွင် ဟောသောသခင်ယေရှု၏ ဒေသနာတော် (၆)
- သခင်ယေရှု၏ ထူးခြားသော ဟောပြောချက်ကြီးများ (၁၀-၁၉)
- ယုဒလူမျိုးတို့နှင့် သခင်ယေရှုနောက်ဆုံးဆွေးနွေးခြင်း (၂၀)
- အနာဂါတ်အတွက် သခင်ယေရှုကြိုတင်ဟောကြားခြင်း (၂၁)
- သခင်ယေရှု၏ နောက်ဆုံးသောနေ့များနှင့် အသေသတ်ခံခြင်း (၂၂-၂၃)
- သခင်ယေရှု၏ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့် ကိုယ်ကိုထင်ရှားတော်မူခြင်းများ (၂၄)
မြန်မာဘာသာ ရှင်လုကာကျမ်း ဒေါင်းလုပ်ရန်လင့်
မြန်မာ Burmese http://murann.com/bluke.pdf
ဗီယက်နမ် Vietnam http://murann.com/vluke.pdf
Luke (one of Bible book)
This Bible book is life of Jesus Christ story written by Luke who isamedical doctor and traveling partner of Apostle Paul. This is first Bible book written by Luke. (2nd book is Act ..wee Act 1:1). This Bible main purpose can be seen in Act. Start with Adam, GOD's will is clearly written in this book. Gospel Luck showed that GOD's will. "Jew and Gentle are same standard and savior of the earth is Jesus". Prayer is important for Jesus Christ's life as well as poor and rejected people get grace and mercy of Jesus Christ. This book specially mentioned, helpless people are special care by Christ. Further more, Luke inserted the joyful and praise Lord stories.
We notice, reading this Bible book will showalot of practical action. (1) only Jesus Christ is way for salvation. Therefore, we ,"everyone" must recognize the Jesus Christ. (2) Eager prayer with holy spirit is important. Without prayer, we can't do big task. (3) Many people receive unfair treatments. We must give grace and mercy to them as we received from Jesus Christ. (4) Good news received by Jesus Christ is the biggest joyful thing. (5) Jesus Christ alway success to bad spirit, dark foolishness power and satan. Sin also succeed by Christ in our life.
2. How to read Luke (Gospel of Luck)?
Luck start this writing specially mention to "most excellent Theophilus" who seem to be high post officer. After the birth of John the Baptist and Jesus were written, Luck wrote Jesus Life in three parts. First part is stories in Galilee (4:15-9:50). Second part is stories along the way to Jerusalem City (9:51-19:27). Third and last part is stories of last week (19:28-24:53). The whole book clearly explained about "the short stories told by Jesus Christ", "wonderful events", "sermons" ..etc. The most we familiar stories are as following.
- John the Baptist birth (1)
- Jesus baarth and his childhood life (2)
- John the Baptist's life of prophecy (3)
- Test of Satan to Jesus and beginning of Jesus Evangelism journal (4)
- First Jesus Gospel at large ground field (6)
- Major Gospel sermons by Jesus (10-19)
- Jewish people and Jesus final discussion (20)
- Jesus Gospel on future (21)
- Jesus last days and crucify (killed) on cross (22-23)
- Jesus resurrection (born again) and many events of showing his body (24)
မြန်မာများစွာသည် ခရစ်တော်နောက်လိုက်များဖြစ်ပြီး၊ အမေရိကားရောက် အရေတွက်သန်းချီရှိသော ဗီယက်နမ်များ၊ သိန်းချီရှိသော မြန်မာများစွာလည်း ခရစ်တော်ကိုသိရှိကြပါသည်။ လက်ခံကြပါသည်။ ပြည်တွင်းတွင်ရှိသော ဗီယက်နမ် သန်း၉၀ အတွက် Online Bible - ရှင်လုကာကျမ်းစာအုပ်ငယ်ဖြစ်ပါသည်။ ဗီယက်နမ်မိတ်ဆွေများ အများစု၏ ယုံကြည်ချက်မှာ ဖရီး ဆိုသော ဘာသာမရှိဖြစ်သောကြောင့်၊ ခရစ်တော်ကို လက်ခံရန် အလွန်ခက်ခဲပါသည်။ သို့သော် ဤလင့်ခ် http://murann.com/vluke.htm (Download http://murann.com/vluke.pdf) ကို ဗီယက်နမ်မိတ်ဆွေ တစ်ဦးဖတ်မိပြီး ခရစ်တော်ကိုလက်ခံသည်အထိ ဘုရားအသုံးချနိုင်ပါသည်။
ရှင်လုကာ ရေးသည့်နေရာနှင့်အချိန် - AD 60 ခန့်၊ ရှင်ပေါလုနှင့်တတိယ သာသနာပြုခရီးစဉ်အတူသွားရင်း ရောမမြို့ (သို့မဟုတ်) ကဲသရိမှာ ရေးသည်။
သော့ချက်ကျမ်း - သခင်ယေရှုသည် လူ့ဇာတိကို ခံယူတော်မူသော ကယ်တင်ရျင်ဘုရားဖြစ်သည်။
ရည်ရွယ်ချက်။ ဂရိလူမျိုး (ဂျူးမဟုတ်သော၊ တပါးသောအမျိုးသား)များကို ရည်ရွယ်ရေးသားသည် လုကာသည် ဂရိလူမျိုးများ၏ ဂန္ဓဝင်မြောက်သည့် ပြောင်မြောက်သော အဆင့်မြင့် ဂရိစာပေဖြင့် တင်ပြထားည်။ ခရစ်ဝင်ကျမ်းများတွင် အရှည်လျားဆုံးဖြစ်ပြီး၊ ပုံဆောင်ချက်များ၊ အံ့သြဘွယ်ရာများ၊ လူ့ဇာတိအလေးပေးဖေါ်ပြသည်။ ဂရိပညာတတ် အထက်တန်းလွှာများအား ရည်ရွယ်သော်လည်း၊ အခြေခံ၊ အပယ်ခံများအကြောင်းလည်း ဖေါ်ပြထားသည်။ (ဆရာဇော်သူလင်း၏ ဓမ္မသစ်လမ်းညွှန်စာအုပ်)။
1. မုရန်လင့် http://murann.com/vluke.htm
2. Vietnam Bible (Luke)